अज्ञात समुहद्वारा गो’ली हा’नी १६ जना गाउँलेको ह’त्या, पुरै गाँउ शोकमा डुब्यो ! – Sudur Samaj
अज्ञात समुहद्वारा गो’ली हा’नी १६ जना गाउँलेको ह’त्या, पुरै गाँउ शोकमा डुब्यो !
अज्ञात ब’न्दु’कधा’रीहरुले अन्धाधुन्ध गो’ली हा’नी १६ जना सर्वसाधारण गाउँलेको ह’त्या गरेका छन् । नाइजेरियामा प्रहरीले आइतबार गाईवस्तु चो’रहरूको गि’रो’हका ब’न्दु’कधा’रीहरूले यस क्षेत्रका वि’द्रो’हीहरूले गरेको पछिल्लो आ’क्र’म’णमा दुर्गम गाउँमा भएको आ’क्र’म’णमा १६ जनाको मृत्यु भएको बताएको छ।
समाचारमा जनाइए अनुसार ती गाउँलेमाथि अज्ञात ब’न्दु’कधारीहरुले गो’ली हा’नेका थिए । उनीहरुले उक्त राज्यको गनार कियाना भन्ने गाउँमा पुगेर गाउँलेमाथि गो’ली चलाएका थिए । ठूलो संख्यामा आएका ब’न्दु’कधा’रीहरुले अ’न्धाधु’न्ध गो’ली प्र’हा’र ग’रे’र उनीहरुको ह’त्या गरेका र अरु कयौँलाई नराम्ररी घाइते बनाएका छन् ।
गत आइतबार राति सो गाउँमा ठूलो हिं’सा भएको प्रहरीले जनाएको छ । तर ती गाउँलेको कसले र किन ह’त्या गरेको हो भन्ने बारेमा भने प्रहरीले केही पनि बताएको छैन ।
प्रत्यक्षदर्शीहरुले त्यस गाउँका गाउँलेमाथि ठूलो संख्याका ह’ति’या’रधा’री आएर ब’न्दु’कले ह’म’ला ग’रे’को बताएका थिए । उनीहरुले दर्जनौँ गाउँलेलाई घाइते बनाएका छन् । ती गाउँमा गएका केही महिनादेखि हिं’साका घटना भइरहेका छन् । तर ती ह’त्याको जिम्मेवारी भने कुनै पनि समूहले लिएको छैन ।
नाइजेरिया गाईवस्तु चो’रहरू र फि’रौ’तीको लागि अ’प’ह’रण गर्नेहरूका आपराधिक गि’रो’हहरूको केन्द्र हो जसले गाउँहरूमा छा’पा मा’र्ने, लु’टपा’ट र घरहरू ज’ला’एर त्यहाँका बासिन्दाहरूलाई मा’र्ने र अ’पह’रण गर्ने अपराध बढेको छ ।
पल शाहलाई १४ र उनका म्यानेजर जोशीलाई ७ बर्ष जेल सजाएको मागदावी गर्दै अदालतमा मुद्दा दर्ता